Gabal Dhacay: Cumar-Saalax Cabdi Xasan | Araweelo News Network | Araweelo News Network
W/Q: Cabdi Yuusuf Aar, Hargeysa, Somaliland
Waxa shalay [Khamiistii] dalka India ku geeriyiooday Alle ha u naxariisto’e Cumar Cabdi Xasan oo loo yaqaanay Cumar-Saalax. Geeridiisu waxay naxdin iyo filan-waa ku noqotay cid kasta oo magaciisa iyo muuqiisa garanaysay, anigana si gaar ah ayay ii taabatay. Muddo dheer ayaanu ahayn saaxiibo isku dheer. Waxanu ku soo wada kornay laba guri oo isu dhow. Hadda oo aanu reero iyo carruuro yeelanayna waxaanu ahayn jaar laba guri oo isku dhaw deggan. Marar badana waanu soo wada shaqaynay. Noloshayada intii ugu badnyd waanu isa soo agjoognay oo isma lihi cid baa kaaga aqoon badnayd. Sidaas daraadeed waxan jeclaystay in aan idinla wadaago taariikh-nololeedkiisii oo kooban.
Cumar-Saalax wuxu ku dhashay Hargeysa sannadkii 1976-kii. Dugsigiisii Hoose wuxu ku qaatay Biyo-Dhacayga Hoose. Markii uu 1988 dagaalku ka qarxay Somaliland ee qaxootiga la noqday wuxu ka mid noqday ardaydii wax ka baran jirtay madarasadii Cabdillaahi Binu Mascuud ee Dulcad, halkaas oo uu ku xifdiyay 30-ka Jus ee Qur’aanka. Markii dalka lagu soo laabtay 1991 waxbarashadiisa wuu sii watay isaga oo arday ka noqday dugsiga Sheekh Cabdillaahi Muuse Qaalib kuna dhammaystay waxbarashada dhexe iyo sare. Waxa kale oo uu koorsooyin ka qaaday mac-hadyadii caanka ahaa ee AIDAM, SIDAM iyo Aflax. Waxbarashadiisa heerka jaamacadeedna inteed ugu badan wuxu ku qaatay “online”. Cumar wuxu ahaa nin waxbarashada aad ugu wanaagsan, waanay adkayd in ciddi ka derajo sarrayso imtixaan kasta oo la galo.